Sidina vaovao avy any San Jose mankany Palm Springs amin'ny Alaska Airlines
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Sidina vaovao avy any San Jose mankany Palm Springs amin'ny Alaska Airlines
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Sidina vaovao avy any San Jose mankany Palm Springs amin'ny Alaska Airlines.
Laharam-pahamehana ho an'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Palm Springs ny fiarovana ny serivisy tsy an-kiato mankany San José, satria i San José, miaraka amin'ny sisa amin'ny Bay Area, dia toerana tsara indrindra ho an'ny mponina sy ny orinasa ao amin'ny Lohasahan'i Coachella.
Amin'izao fotoana izao, ny mpandeha dia afaka mankafy serivisy tsy an-kiato mandritra ny taona eo anelanelan'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Mineta San José (SJC) sy Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Palm Springs (PSP), Noho ny Alaska Airlines.
Ny sidina isan'andro dia miainga ao Mineta San José amin'ny 8:10 maraina, tonga ao Palm Springs alohan'ny 9:30 maraina, isan'andro. Ho an'ireo any Palm Springs, ny sidina isan'andro mankany San José dia miainga amin'ny 10:10 maraina
"Ny serivisy tsy an-kiato mankany Palm Springs dia lalana nangatahana indrindra nandritra ny taona maro," hoy i John Aitken, talen'ny SJC momba ny Aviation. "Ity rohy misy eo amin'ny Lohasahan'i Silicon sy Coachella Valley ity dia famantarana mampientam-po amin'ny fahasitranana, ary ireo faritra roa ireo dia hahazo tombony amin'ny serivisy mety sy isan'andro."
“Ny fiarovana ny serivisy tsy an-kiato mankany San José dia primeho an'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Palm Springs", hoy i Ulises Aguirre, Tale Mpanatanteraka ny Aviation ho an'ny tanànan'i Palm Springs. “San José, miaraka amin'ny faritra hafa ao amin'ny Bay Area, dia toerana tsara indrindra ho an'ny mponina sy ny orinasa ao amin'ny Lohasahan'i Coachella ary isaoranay izahay. Alaska Airlines amin'ny fampifandraisana ny PSP amin'ny SJC.
Ny sidina 80 minitra dia miasa amin'ny fiaramanidina Embraer 175, misy seza 76; 12 amin'ny raharaham-barotra ary 64 amin'ny toekarena.
Manomboka ny fotoam-pialan-tsasatra amin'ny Thanksgiving, izay manomboka anio, miaraka amin'ny Mineta San José International manantena mpandeha 400,000 amin'ny faran'ny herinandro ho avy.